Maxaa dhacaya Augusta kalfadhigan sharci-dejinta? - Amjambo Africa
Maxaa dhacaya Augusta kalfadhigan sharci-dejinta?
Waxaa qoray Ulya Aligulova Wariye sharci-dejineed Amjambo
During sessions of the Maine Legislature, Amjambo Africa will run monthly updates about legislation important to communities of color.
Kalfadhiga Labaad ee Caadiga ah ee 130-aad ee Sharci-dejinta Maine waxa uu socon doonaa Janaayo 5 ilaa Abriil 20, 2022, iyo sharciyo badan oo muhiimad weyn u leh bulshooyinka midabka leh ayaa inta lagu guda jiro waqtigan ay tixgelinayaan sharci-dejiyayaal. Habka dimoqraadigu wuxuu u ogolaanayaa xubnaha ka tirsan inay taageeraan biilasha ay daneeyaan oo ay saameeyaan biilasha ku dhamaanaya, miiska Guddoomiyaha. Inta badan, biilashan leh taageerada dadweynaha ee ugu weyn waa kuwa ku dambeeyay meel-marin, inkastoo Guddoomiyuhu xaq u leeyahay inuu diido sharci.
Flavia, Susan, and Trudy with Rep. Rachel Talbot Ross
Ururada sida ACLU ee Maine, Maine Equal Justice, iyo Maine Immigrants’ Rights Coalition waxay hogaamin doonaan shaqo u doodid joogto ah si ay u taageerada biilasha kala duwan oo ay dadka ka caawiyaan inay wadaagaan awooda codkooda. Ingiriis faseeha shardi ma aha in laga qayb galo, caawimo luuqada badanna waa la heli karaa. Amjambo Africa waxay bixin doontaa warar cusub oo ku saabsan biilasha ay u socdaan habka sharci dejinta, iyo sidoo kale macluumaadka ku saabsan sida looga qayb qaado karo.
Inta uu socdo kalfadhiga, guddiyada sharci-dejinta ayaa qaban doona dhageysi dadweyne oo xubnaha bulshadu ay ka dhiiban karaan ra’yigooda sharciga la soo jeediyay. Sidoo kale, shakhsiyaadku waxay la xidhiidhi karaan wakiilada, senetarada maxalliga ah, iyo sharci-dejiyeyaasha guddiga dib u eegista sharci gaar ah si ay ula wadaagaan sheeko shakhsiyeed, iyo/ama ku biiraan maalmaha ololaynta ee loo habeeyey si ay u xoojiyaan taageerada sharci gaar ah. Intaa waxaa dheer, dadku waxay u qori karaan waraaqo tifaftiraha daabacadaha sida Amjambo Africa.
Mudnaanta biilasha kalfadhigan.
Hal sharci oo muhiimad weyn u leh bulshooyinka midabka leh waa LD 1610, sharciga wehelka ee kalfadhigii u dambeeyay LD 2 \_”Xeerka u baahan in lagu daro Bayaanada Saamaynta Jinsiga ee Geedi Socodka Sharci-dejinta\_” kaas oo la ansixiyay sharci-dejinta u dambaysay, fadhi Xildhibaan Talbot Ross waa kafaala-qaadaha labada biilasha.
LD 2 waxay u baahan tahay in xogta guddiga sharci-dejinta, falanqaynta, iyo macluumaadka kale ee lagama maarmaanka u ah si ay u diyaariyaan bayaanka saamaynta jinsiyadeed – ama qiimaynta saamaynta suurtagalka ah ee sharci kasta oo cusub uu ku yeelan karo dadka jinsiyadaha ah ee tabaalaysan taariikh ahaan – in la bixiyo marka ay codsadaan guddiga Sharci-dejinta. LD1610 waxa ay taageertaa LD 2, marinkuna waxa uu wanaajin doonaa awooda Maine ee ururinta, dhexe, iyo isticmaalka xogta si loo horumariyo sinnaanta samaynta siyaasada gobolka.
“Inkasta oo aan ognahay iyada oo ku saleysan xogta dhabta ah iyo xogta laga helay aasaaska iyo ururada bulshada in dadka midabka leh ay la kulmaan waxyeelo aan toos ahayn oo ka imanaysa siyaasado ama nidaamyo kala duwan, weli ma soo bandhigi karno xog ku filan oo caddayn ah tan,\_” ayay tiri Kathy Kilrain del Rio, Agaasimaha Barnaamijyada Qareenada ee Maine Equal Justice.
“Tani waa qayb ka mid ah dadaal ballaaran oo Guddiga Joogtada ah [ee Xaaladda Isir, Asal ahaan iyo Maine Qabiilada, oo la aasaasay 2019] ay diiradda saareen si loo hubiyo inaan awood u yeelanno inaan aruurino xogta saxda ah iyo falanqaynteeda. qiyaasi sida aan u farsamayn karno siyaasadaha ku salaysan xogtaas ka caawinaysa yaraynta farqiga jinsiyadeed,” Kilrain del Rio ayaa yidhi. Guddiga Joogtada ah waa hay’ad madax-bannaan oo baarta farqiga jinsiyadeed ee dhammaan nidaamyada oo ka shaqeeya horumarinta heerka iyo natiijooyinka qowmiyadaha, asalka iyo qabiilka ee Maine taariikhiyan liidata.
“Sharci kale oo isha lagu hayo waa LD1679, oo uu kafaalo qaaday Sen.” “Waxaa jiray dadaal sannadkii hore si loo hubiyo in qof walba oo dugsiyada ku jira ay heli karaan cunto bilaash ah, taas oo ah hab weyn oo lagu caawinayo dhimista gaajada ka jirta gobolkeena,” Kilrain del Rio ayaa yidhi.
“Sidaa darteed caruur badan oo gobolka oo dhan ah waxay ku tiirsan yihiin cunto dugsiyeedka bilaashka ah. Taasi waxay si gaar ah run ugu tahay carruurta soo-galootiga ah maadaama ay jiraan xannibaado ku jira SNAP iyo barnaamijyada kale ee gargaarka cuntada ee ka saaraya dadka aan muwaadiniinta ahayn. Sanadkii hore waxa lagu daray miisaaniyada kabka. Waxaan isku dayeynaa inaan ku riixno maalgelin dheeraad ah sanadkan sidoo”
“Hal biil oo aan si gaar ah kor ugu qaadi lahaa waa LD 718,”Kilrain del Rio ayaa sii waday. Waxaa kafaala qaaday xildhibaan Talbot Ross, LD 718 waxay xiri doontaa farqiga u dhexeeya barnaamijka MaineCare taas oo ay ugu wacan tahay xannibaadda federaalku waxay dadka qaar ka saaraysaa inay galaan MaineCare xaaladdooda socdaalka awgeed…’ “Kani wuxuu ahaa sharci aan ka shaqeynay sannadkii hore sidoo kale. Waxaan rabnaa inaan xirno farqigaas si dhammaan Mainers, iyadoon loo eegin xaaladdooda socdaalka, ay u helaan MaineCare haddii ay dakhligoodu yar yahay. Waxaan ognahay inay muhiim u tahay caafimaadka shakhsiyadeed oo keliya laakiin sidoo kale caafimaadka wadajirka ah. Haddii ay jiraan wax masiibadani ina bartay, waa in caafimaadkayaga guud uu midba midka kale ku tiirsan yahay.
Waxa aanu yeelanay dhegaysi dadweyne oo xooggan oo ay ka markhaati fureen in ka badan 90 qof oo taageersan sharcigan kalfadhigii hore. Guddoomiyaha ayaa ku daray qayb ka mid ah LD718 soo jeedinteeda miisaaniyada dheeriga ah, LD221, taas oo fidisay caymiska dadka ka yar 21 jir iyo dadka uurka leh iyada oo aan loo eegin xaaladdooda socdaalka. Laakiin wali maanu xidhin farqigaas dhammaan dadka waaweyn. LD718 waxaa dib loogu celiyay Guddiga Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha, laakiin waan sii wadi doonaa inaan u doodno.”
“Kulankan waxaan si gaar ah u daawan doonnaa biilasha madax-bannaanida qabiilka,\_” ayuu yiri Meagan Sway, Agaasimaha Siyaasadda ee ACLU ee Maine. Biilashan waxaa ka mid ah LD1626, LD554, iyo LD585, oo uu kafaalo qaaday Sen. Luchini, Rep. Collings, iyo Rep. Talbot Ross, siday u kala horreeyaan. Qabiilada Maine waxay u dagaalamayeen sidii ay wax uga qaban lahaayeen dhibaatooyinka Xeerka Dhaqangelinta Degista Sheegashooyinka Maine Hindida ee 1980, kaas oo ku dhawaaqaya in Koongarasku ansixiyo oo ansixiyo wareejinta dhulka ama kheyraadka kale ee dabiiciga ah ee ku yaal meel kasta oo gudaha Mareykanka ah kana timid, ama wakiil ka ah. Qabiilka Passamaquoddy, Qaranka Penobscot, Kooxda Houlton ee Hindida Maliseet, ama mid ka mid ah xubnahooda.
Qabiilka Maine waxay leeyihiin xuquuq ka yar inta badan qabaa’ilka kale ee dalka oo dhan sababtoo ah hal heshiis oo maxkamadeed oo laga soo bilaabo 80-meeyadii,” Sway ayaa sharaxay. “Tani waa arrin gaar ah oo loogu talagalay bulshooyinka midabka leh sababtoo ah waxay wax ka qabanaysaa siyaabaha ay dawladda caddaanka ah u dejisay qabiilooyinka, iyo biilashani waxay isku dayayaan inay hagaajiyaan dhibaatooyinkaas.”
Shaqaalaha beeralayda guud ahaan waa laga saaray sharciyada ilaalinta shaqada ee soo jireenka ah, si kastaba ha ahaatee dhawr biilal oo khuseeya shaqaalaha beeraha, gaar ahaan LD151, oo uu kafaalo qaaday Rep. Harnett, ayaa u ogolaanaya shaqaalaha beeralayda inay midoobaan. Maine, shaqaale badan oo beeraley ah ayaa ah muhaajiriin iyo dad midab leh.
Kalfadhigii u dambeeyay, LD764 waxa ay natiijadeedu noqotay in la abuuro guddi dib-u-eegis ku sameeya diiwaannada dembiyada kaas oo u soo jeedin doona sharciga guddiga garsoorka ee ku saabsan xidhitaanka diiwaannada dembiyada. \_”Mayne, mar haddii lagugu xukumo dembi, aad bay u adagtahay in laga fogaado diiwaankaas dambiyada, kaas oo keeni kara cawaaqib xun oo xagga guriyeynta, shaqada, kaalmada ardayda – dhammaan waxyaabaha aan ku tiirsannahay si aan u helno nolol xasilloon,\_” Sway sharaxay. \_”Taasi waxay saameyn weyn ku leedahay dadka midabka leh sababtoo ah aad ayay u badan yihiin si aan loo qiyaasi karin loo beegsaday laguna ciqaabay nidaamka sharciga dembiilaha.”
PreviousWanaagsan – waxaad bilowday ganacsi. Hadda maxaa?
NextGuriga Wuxuu Ka Bilaabmaa Jidhka